musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ko Ryanair's Bullish Zhizha 2022 Zvirongwa Zvinobhadhara Zvikwereti?
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Yendege huru kwazvo yeEurope inodhura inoona zhizha 2022 senguva yayo yekupenya, uye gadziriro iri kuenderera.
Ryanair yakaisa mabheti ayo pakudzosera kudiwa nekutanga mammoth ekutsvaira drive kune zviuru zviviri vezvikepe mumakore matatu anotevera.
Ryanair ichatora kuendesa makumi mashanu eiyo nyowani mazana maviri+ ndege yekuraira nezhizha 50.
Nekuda kwepent-up kwekufamba kunokwira, Ryanair inogona kunge iri imwe yendege dzakamisikidzwa dzakanakisa kuti dziwane kudiwa.
Ryanair yakaisa ziso rayo pazhizha rakasimba 2022. Nekumirira kuendeswa kwendege nyowani uye huru yekutsvaga vanhu, gore rinouya rinotaridzika kubhadhara zvikwereti kunhandare yendege, kunyangwe vamwe vafambi vachiona mabhajeti ekufamba akapera.
Yendege huru kwazvo yeEurope inodhura inoona zhizha 2022 senguva yayo yekupenya, uye gadziriro iri kuenderera. Ryanair yaisa mabheti ayo pakudzosera kudiwa nekutanga mammoth ekutsvaga kutyaira kwe2,000 vatyairi mumakore matatu anotevera. Zvakare, Ryanair ichatora kuendesa makumi mashanu eiyo nyowani mazana maviri+ enhandare yendege nezhizha 50, sezvo ichigadzirira mwaka wayo wakanyanya kubatikana post-COVID kusvika zvino. Nekuda kwepent-up kwekufamba kuchikwira sezvo zvirambidzo zvinotanga kureruka muEurope, Ryanair inogona kunge iri imwe yendege dzakanakisa kuti dziwane kudiwa, uye izvi zvinogona kubereka zvibereko kumutakuri, kunyanya nendege yayo nyowani.
The itsva Boeing Ndege 737-8200 ichapa zvigaro zvisere zvichienzaniswa nendege dzazvino zana nesere, apo ichideredza kupisa kwemafuta ne189% pachigaro uye ichideredza ruzha / CO16 inoburitsa, izvo zvinofanirwa kubatsira kudzikisa mutengo zvakanyanya.
Ryanair's nyowani-inoshandura nendege inoita senge yekutyaira yayo yatove yakaderera-mutengo hwaro kunyangwe yakaderera. Kutsva kwemafuta pachigaro kuchaderedza mari inoshandiswa pamafuta, zvobva zvapa nendege mari yekuchengetedza. Kana ikapfuudzwa kune vanofamba, Ryanair ichave iri yakasimba nzvimbo yekudzikisa mitengo yetikiti, kuve inokwikwidza, uye kutsika zvigunwe zvevamwe vatambi. Ndege nyowani yaRyanair, pamwe chete nematanho epamusoro ekudiwa kwepent-up, angangoona mutakuri achibudirira mune yepashure-COVID nharaunda, achikwezva vafambi vazhinji vanoziva bhajeti vanogona kunge vakataura kutendeka kwavo kumwe kunhu kusati kwave nedenda.
Ongororo ichangoburwa yakaratidza kukanganisa kwakaita denda iri pamabhajeti evashanyi ne11% yevakabvunzwa vachitaura kudzikiswa kwebhajeti yekufamba post-COVID
Nemari yakadzikiswa, vafambi vakambosarudza vatakuri vesevhisi vanozogona kuenda kune vanotenga mitengo kwenguva pfupi. Ryanair ichave yakamisikidzwa zvakanaka ichienzaniswa nedzimwe, kunyanya kupihwa kuunzwa kwendege yayo nyowani uye nemari yekuchengetedza iyo yainogona kupfuudza kukurudzira kudiwa.
Uyezve, imwe ongororo yakaratidza mutengo sechinhu chakakosha kwazvo pakusarudza mhando yendege. Vanopfuura hafu (52%) yevakabvunzwa vakasarudzwa mutengo / kukosha sechinhu chikuru - icho chinomirira zvakanaka Ryanair.
Nzvimbo yemakwikwi yendege, mitengo yepasi, uye netiweki yeEuropean ichabhadhara mibairo uye yaigona kuona iyo ndege senge mutakuri wesarudzo yekufamba kwemashure-COVID. Uine mubhadharo wezvaunoda modhi, Ryanair ichave inokwezva kune avo vari kutsvaga iyo yakakosha sevhisi. Inogona kuzunza zvakanyanya vatambi, uye nzira yayo yekusimudzira ichaiona ichikunda vafambi kuti ibatsire kubuda nesimba kubva mudenda.